दुबईमा चार दिन, लक्जरी र एक्सोजिटिज्म | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | दुबई, मार्गदर्शकहरू
यदि तपाईं प्राचीन इतिहास चाहानुहुन्छ भने गन्तव्य यूरोप हो तर यदि तपाईं आधुनिक लक्जरी र साइफाइ पोस्टकार्ड चाहनुहुन्छ भने तपाईं दुबईको यात्रा विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
आज दुबई फेसनमा छ, केहि चीज जुन अरबीहरूले आफैंले केहि समय अगाडि गर्न सेट गरे: तिनीहरूको भूमिलाई लक्जरी पर्यटन गन्तव्यमा परिणत गर्नुहोस्, मरुभूमि शहर बनाउनुहोस् र यसलाई आधुनिक इन्जिनियरि of्गको शक्तिले चम्काउनुहोस्। ठिक छ, तिनीहरूले हामीलाई जितेका छन्, तर दुबईमा हामी चार दिन के गर्न सक्छौं??
1 दुबई, मध्य पूर्वको रानी
2 दुबईमा पहिलो दिन
3 दुबईमा दोस्रो दिन
4 दुबईमा तेस्रो दिन
5 दुबईमा चौथो दिन
दुबई, मध्य पूर्वको रानी
दुबई एक इमिरेट छ जसले छ अन्य व्यक्तिको साथ कम्पोज गर्दछ, संयुक्त अरब अमीरात। यो फारसी खाडीमा टर्छ, अरबी मरुभूमिमा। स्वाभाविक रूपमा यो तेल भन्दा पहिले अस्तित्वमा थियो, यहाँ वरिपरिका मानिसहरू मोतीको व्यापारमा बढी थिए, तर यो बेलायतीहरूले कब्जा नगरेसम्म यसको पश्चिमी हितमा स्थान थियो।
दुबई यो संवैधानिक राजतन्त्र हो र एक तेल देशको बावजुद, वित्तीय भनेको यो हो जसले यसको अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा बढी आम्दानी ल्यायो। साथै निर्माण क्षेत्र पनि पक्कै पनि हो र दुबई मरुभूमिबाट आफ्नै ब्राजिलको साथ देखा परेको छ। र सत्य कुरा भनौं भने, यदि यो शहरी क्षितिज नभएको भए हामी अहिले दुबईको बारेमा कुरा गर्ने छैनौं।
किन चार दिन? विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा यात्रा गरे पछि मैले महसुस गरें कि म चार दिन सूत्र मेरो लागि धेरै राम्रो काम गर्दछ। तीन दिन सँधै सानो हुन्छ किनकि म थाकेको छु र मैले स्क्र्याचबाट सार्न सिक्नुपर्दछ, पाँच दिन सामान्यतया लामो समय हुन्छ यदि म सर्दिन र भ्रमण गरेन भने वा दिन यात्रा, त्यसैले चार जादुई नम्बर हो।
दुबईमा पहिलो दिन
तपाईं आइपुग्नुहुनेछ दुबई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। यदि तपाईं दिनमा आइपुग्नुभयो भने, तपाईंले विमानबाट यस आधुनिक शहरलाई चिन्नुहुनेछ जुन शाब्दिक उजाडस्थानमा अवस्थित छ र तपाईंले कृत्रिम टापुहरू पनि देख्नुहुनेछ जुन यसको लागि प्रख्यात छ। एक सौन्दर्य जसले प्रभाव पार्छ। विमानस्थल यो केन्द्रबाट पाँच किलोमिटर टाढा छ र तीन टर्मिनलहरू एक अर्कासँग बसले जोडिएको छ। जब सम्म तपाईं एमिरेट्स को माध्यम बाट यात्रा गर्नुहुन्न, तपाईं टर्मिनल १ र २ मा पुग्नुहुनेछ।
त्यहाँ एक राजमार्ग छ जुन सीधा शहरमा पुग्छ तपाईं वातानुकूलित ट्याक्सी, लिमोजिन र बस लिन सक्नुहुन्छ। यी बसहरूले कार्डसँग काम गर्दछ जुन तपाईंले मेट्रो स्टेशनमा किन्नुपर्दछ (सावधान हुनुहोस् कि यो रातमा बन्द हुन्छ), र तिनीहरूसँग धेरै मार्गहरू छन्। सब भन्दा उत्तम विकल्प सबवे हो: छिटो, ताजा, सफा। टर्मिनल १ र From बाट यो हरेक १० मिनेटमा बिहान ::1० देखि मध्यरात सम्म वा बिहिबार र शुक्रवार बिहान १ बजेसम्म सुरू हुन्छ।
शुक्रबार बिहान कुनै मेट्रो सेवा छैन, यो दिउँसो १ बजे काम गर्न थाल्छ, र त्यहाँ दुई लाइनहरू छन्। यदि तपाईं छिट्टै आइपुग्नुभयो भने तपाईं होटल जानुहुन्छ, आराम गर्नुहोस् र छाड्नुहोस्, यदि तपाईं रातमा आउनुहुन्छ भने, तपाईं सुत्न सक्नुहुन्छ र अर्को दिन यो दुबईमा तपाईंको पहिलो दिन हुनेछ। तपाईं लाभ लिन सक्नुहुन्छ, चाँडै उठ्नुहोस् र एक बनाउनुहोस् शहर भ्रमण द्वारा सुरू दुबई मल्लको माध्यमबाट हिँड्न। त्यहाँ लगभग १२०० पसलहरू छन्, तर यसका साथै एक एक्वेरियम र अद्भुत अन्डरवाटर चिडियाखाना छ। र स्कीइ for को लागी एक बरफ रिन्क!
शपिंग सेन्टर शहरको केन्द्र माथिको बाहिरी क्षेत्रमा खुल्छ र घास संगीत फन्टहरू दुबईको प्रतिष्ठित भवन ब्रुज खलीफाको रमाईलो र राम्रो दृश्य। जब सूर्य तल जान्छ प्रकाश र ध्वनि कार्यक्रम यो हरेक आधा घण्टा साँझ6देखि १० बजे सम्म लिन्छ त्यसैले यो फर्कने राम्रो ठाउँ हो।
बुर्ज खलिफा तपाईको गन्तव्य दिउँसो5देखि हुनेछ तर तपाईले Playa de Las Cometas भ्रमण गर्नु अघि वा काइट बीच, एक ठाउँ जहाँ तपाईं पानीको खेलकुद गर्न सक्नुहुन्छ, क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूमा जुसको आनन्द लिनुहोस् र आइकनिक दुबई होटेलको राम्रो दृश्य छ।
बुर्ज खलिफा जानु भन्दा राम्रो छ र म विश्वास गर्दछु कि तपाईंले दिन र रातको आनन्द लिनुपर्दछ, त्यसैले यो सूर्यास्त भन्दा पहिले जानुहोस् र त्यहाँबाट अवलोकन गर्नु राम्रो हुन्छ। वेधशाला फ्लोरलाई एट द टॉप भनिन्छ र प्रति वयस्क १२ 125 दिरहम खर्च हुन्छ। यो बुकिंग गर्न सुझाव दिइन्छ किनकि यस तरीकाले टिकट बक्स अफिसको भन्दा कम खर्च हुन्छ र त्यहाँ सँधै मानिस हुन्छन् १२124 औं तलाबाट दुबईको दृश्य लिनुहोस्। यो मलबाट प्रवेश गरीएको छ।
दिनको अन्त्यसम्ममा तपाईंसँग समुद्री तट, हिंड्ने, एक रेस्टुरेन्टमा खाना र सूर्यास्त मिटर र मीटर उचाइ छ। तपाईं खाना खान बाहिर गएर दिनको अन्त्य गर्नुहोस्।
दुबईमा दोस्रो दिन
यो एक दिन बाहिर जानुहोस् र सबै भन्दा क्लासिक दिन यात्रा: यो दिन हो मरुभूमि सफारी × × truck ट्रक द्वारा। भ्यानले तपाईंलाई तपाईंको होटेलमा पु and्याउँछ र काराभानबाट तपाईंलाई टिब्बामा लैजान्छ, यिनीहरूमध्ये धेरै धेरै उच्च हुन्छ, जुन डाउनटाउनबाट २० मिनेट मात्र हुन्छ। तपाईं मरुभूमिको बीचमा रहेको एउटा अरब शिविरमा पनि समय खर्च गर्नुहुन्छ र तपाईं नाँच्न वा ऊँटमा सवारी गर्न, हेन्नामा चित्रित गर्न वा स्वादिष्ट खान सक्नुहुन्छ।
तपाई बाहिर दिनभरि बित्नुभयो र साँझ फर्कनुभयो, धेरै थकित, तर खुशी। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हिँड्न तपाईं सबै दिन लाग्छ र तपाईं केहि गर्न को लागी थकित हुनुहुन्छ।
दुबईमा तेस्रो दिन
तपाईं उठ्न सक्नुहुन्छ र शहर को सब भन्दा पुरानो भाग, Bastakia मा टहल। यहाँ केहि सब भन्दा महत्वपूर्ण संग्रहालयहरु र सबैको पुरानो भवन हो, अल फहीदी फोर्ट, आज दुबई संग्रहालय, जुन एक तरीकाले सम्पूर्ण छिमेकमा यसको नाम दिन्छ। साँघुरो, खुला सडक, गल्ली र टावरहरू। इतिहासलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि यो एक धेरै राम्रो गन्तव्य हो। तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ जुमेराह मस्जिद र केहि फोटोहरू लिनुहोस्।
यदि तपाइँ एक लिनुहुन्छ पानी ट्याक्सी (भनिन्छ अब्रा र तिनीहरूको लागत and र १० दिरहम बीचमा छ), र तपाईंले क्रिकमा हाम फाल्नुहुनेछ तपाईं घुम्न सक्नुहुनेछ मसलाको बजार र केहि गन्ध र सुनको गहना किनमेल गर्नुहोस् गोल्ड सूक। त्यहाँ सबै कुरा छन् र मूल्यहरू सामान्यतया राम्रो हुन्छन्। क्रिक भनेको नुनिलो पानी मुहान हो, बानी यास जनजातिको मूल बस्ती, र यो यहाँ मोतीहरू माछा पकाइन्थ्यो, उदाहरणका लागि।
तपाईं यहाँ खाजा खान सक्नुहुन्छ र दिनको बाँकी दिन खर्च गर्न सक्नुहुन्छ मदिनत जुमेरा, un प्राचीन गढीबाट प्रेरित मनोरञ्जन जटिल लक्जरी होटल, स्पा, थिएटर, रेस्टुरेन्ट र अन्यको साथ।
अझ राम्रो, तपाईं एक को लागी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ डिनर क्रूज र दुबई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्। तिनीहरू दुबई क्रिक वा दुबई मारिना क्रिकबाट प्रस्थान गर्छन् र दुई घण्टा पछि।
दुबईमा चौथो दिन
म पाम टापु बिर्सदिन, पाम टापु, वा को शेख दरबार, तर यदि तपाइँ रमाईलो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँले सामेल हुनै पर्दछ पहेंलो डुat्गा टूर: मोटर चालित रबर डु boat्गामा सवारी जुन 60० मिनेट लामो हुन्छ। तिनीहरू छ देखि आठ व्यक्तिको बीचमा बोक्न सक्छन् मरीना नदी तल गति तपाईंलाई दुबई र पाम, बुर्ज खलिफा, एटलान्टिस र याकेटको शानदार दृश्यहरू प्रदान गर्दै। बोर्डमा एक अनुभवी गाइड छ जो तपाईले देखिरहनु भएको सबै राम्ररी लेखा लिन्छ।
पाम जुमेरिया कृत्रिम टापु हो जुन आकारबाट पाम रूखको आकारबाट देखा पर्दछ ठाउँ। यससँग होटल र निवासहरू केवल धनी र प्रसिद्धको लागि छ। यदि तपाइँ एक गर्नुहुन्छ हेलिकप्टर भ्रमण तपाईं यसको सबै भव्यतामा यसलाई चिन्तन गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईं यस सडकहरूमा हिंड्नुहुन्न तर भूमिको स्तरमा चिन्ताको लागि सुन्दर हवेलीहरू भन्दा बढि केही छैन। यस टापुको अन्त्यमा एट्लान्टिस होटेल जुन एउटा साहसिक पार्क हो।
तपाईं कसरी टापुमा पुग्नुहुन्छ? खैर तपाईं ले मोनोरेल त्यसले तपाईंलाई टापुको सुरुमा छोड्छ र फिर्ता हुन्छ त्यसैले यो कार भन्दा उत्तम हो। सूर्यास्त हुनु अघि यो अझ सुन्दर छ। यातायातको कुरा गर्दा, यो भन्नु आवश्यक छ कि तपाई भाडामा रहेको ट्याक्सीमा दुबई वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ किनकि मूल्यहरु उचित छ, तर मेट्रो धेरै बढी कुशल छ र यसको स्टेशनहरू एकदम राम्रो स्थानमा छन्। त्यहाँ केवल दुई लाइनहरू छन्, त्यसैले यो अझ उत्तम छ।
र अन्तमा, दुबईमा चार दिन बस्नको लागि तपाईं पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ मनोरन्जनकर्ता पैसा बचत गर्न। यो आकर्षण, होटेल र रेस्टुरेन्टहरूमा छुटको साथ भाउचरहरूको साथ आउँदछ। यसको लागत AED 395 छ र यदि तपाईंले चार दिनसम्म यो प्रयोग गर्नुभयो भने यो सुविधाजनक भन्दा बढि छ। यो पहेलो डुat्गा टूर, धो क्रूज, मरुभूमि सफारी र अधिकको लागि उपयोगी छ।
यी दुबई मा मेरो चार दिन हो। म त्यहाँ हुँदा मैले सेशेल्समा यात्रा जारी राखें, एउटा सुन्दर गन्तव्य र टाढा थिएन। के तपाइँ जारी राख्न चाहानुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » दुबई » दुबईमा चार दिन, लक्जरी र एक्सोजिटिज्म
गालिसियामा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
चीन, रेकर्ड पुलहरूको देश